Umphumela Wokusabalalisa kwe-Ultrasonic kuma-Inline Measurements - Hielscher Ultrasound Technology
Imiphumela Yomsakazeli we-Ultrasonic ku-Inline Measurements
Ukuze kube nokuhlukaniswa nokulinganisa kwezinhlayiya eziyinhloko, izinhlayiya kufanele zihlakazeke njengoba izimboni zikhohlisa imiphumela yokulinganisa. I-Ultrasound iyithuluzi elinokwethenjelwa lokubhubhisa izimbulunga futhi ukudala izimo lapho izinhlayiya eziyinhloko zibamba khona ngokwanele komunye nomunye ukuze zitholakale njengezinhlayiya ngabanye. Ucwaningo olulandelayo lweSequip luveza inhlanganisela ephumelelayo yamaHielscher Amadivayisi we-Ultrasonic ne-Sequip's Izinzwa ze-PAT ngokuba ukuhlukaniswa kwezinhlayiya ezinokwethenjelwa.
Ngenxa yokubambisana phakathi kwezinhlayiya, isib. Amabutho e-van der Waals, izinhlayiyana zivame ukuhlanganiswa nokuhlanganiswa. Ngaleyo ndlela, izinhlayiya eziningana (eziyinhloko) zihlangana ndawonye futhi zakha izinhlayiyana eziyinkimbinkimbi (okuthiwa izinhlayiya eziyisibili). I-agglomeration nezinqubo zokuhlanganiswa zithinta isilinganiso ngokubaluleka ngenxa yokuthi:
kushintshaniswa ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana (kusukela ama-agglomerate alinganiswa njengenhlayiyana eyodwa)
izinguquko ezakhiweni zokugeleza
izinguquko zesimo evamile sokwaziswa
Ngenxa yalokho, le nqubo ithonywe yizinguquko eziningi, eziphazamisa ukuhlolwa okunokwethenjelwa.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kuyisinyathelo esibalulekile sokulungiselela isampula ngaphambi kokulinganiswa kobukhulu bezinhlayiyana. Ukusakazwa kwe-Ultrasonic kunikeza ukusatshalaliswa kosayizi bezinhlayiya.
Ukuthonya kwe-Ultrasonic ku-Particle size Measurement
Izinzwa ze-Sequip ze-PAT zenzelwe ukulinganisa okuqondile kwezinhlayiyana ukuze ukuguqulwa kokusabalalisa usayizi wezinhlayiyana kubhalwe njalo futhi kuhlolwa ngokuphepha. Imishini yokulinganisa i-PAT ye-in-situ ivumela ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngesikhathi kuthuthukiswa ama-formulations amasha ngokuphathelene nokusebenza kwe-morphology jikelele nokulawula ikhwalithi yomkhiqizo ngesikhathi sokucubungula.
Isilinganiso singenziwa en-situ ebhokisatri noma eline-inline nasesikhathini sangempela ngesikhathi senqubo yokuhlinzeka imiphumela eqondile yokulinganisa kuye ngezici zomkhiqizo nobubanzi obukhulu besayizi.
Sequip I-Lab Sensor
Ama-agglomerate aqeda imiphumela yokuhlukanisa izinhlayiyana. Ngezilinganiso ezinokwethenjelwa, inqubo yokwahlukana kumele ivinjelwe. Indlela elula kuyoba ukwengeza kwesithasiselo se-dispersant / dispersing. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwe-dispersant kushintshe ukubunjwa kwangempela komkhiqizo futhi ngenxa yalokho imiphumela yesilinganiso ngeke ibonise ukusatshalaliswa kwangempela kwesayizi. Ukuze kulawulwe inqubo ngesikhathi sokukhiqiza, ukusebenzisa izithasiselo zokuhlakaza kungendlela engalungile.
Umdwebo ongezansi ubonisa i-PVC800, i-poly vinyl chloride, ene-particle distribution distribution. 500-630μm. Noma kunjalo, ngenxa yokwehlukana kwemiphumela yokulinganisa kubonisa izintaba ezingu-1400μm.
Umdwebo 1 ubonisa ukulinganisa kwe-PVC 800: I-PVC 800 ibonisa ngokuvamile ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ngezingqimba ku-approx. 500-630μm. Nakhu, nokho, iziqu ezifinyelela ku-1400μm zilinganiselwa ngenxa yokuhlanganiswa.
Inqubo ehlukile-yokuzibandakanya ukufakwa kwe-disperser ye-ultrasonic.
Ukuze kuboniswe ithonya elihle le-ultrasonic dispersing, ukumiswa kwe-PVC800 kwakwenziwe nge-sonication. I-beaker yeglasi ne-PVC800 yokwakhiwa yanikezwe nge-ultrasonic disperser UP200S kuyilapho izinhlayiya zitholakala ku-situ ne-Sequip's PAT inzwa.
I-ultrasonic homogenizer imibhangqwana ye-ultrasound ibe yi-medium generating vibrations mechanical kanye namandla amakhulu we-shear. I-high-power, i-low-frequency ultrasound ihlakaza izimbulunga ngempumelelo. Ngaleyo ndlela, izinhlayiya ezilodwa kuphela ezifinyelela ekugxilweni kwenzwa ukuze ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana weqiniso kungalinganiswa – njengoba kuboniswe ngokucacile kulo mdwebo olandelayo:
Umdwebo 2: Umdwebo ubonisa ngokucacile ukuthi ukukala kwezinhlayiya ze-PVC 800 nge-ultrasound (eluhlaza) kunesilinganiso esincane sokwabiwa kwezinhlayiyana kwezinhlayiyana kunemiphumela yokulinganisa etholakala ngaphandle kwe-ultrasound (obomvu).
Kuye kwaboniswa ukuthi i-ultrasonication iyithuluzi elanele nelinokwethenjelwa de-agglomeration futhi i-particle breakage. Ukuhlakazeka kwe-ultrasonic kungenziwa ngokuvumelana nezimo kunoma yisiphi isigaba sokukhiqiza futhi kuqinisekiswe ukulinganisa nokulinganisa ubukhulu bezinhlayiyana ngeSofthiwe ye-Sequip's PAT.
Chofoza lapha ukuze uvakashele ikhasi lasekhaya likaSequip futhi ufunde kabanzi mayelana nezinzwa zabo ze-PAT zokulinganisa izinhlayiya!
Ukusetha kokuhlola: Sequip I-PAT inzwa nge-ultrasonic disperser UP200S
I-ultrasonic izicubu ze-homogenizers ngokuvamile zibizwa ngokuthi i-sonicator / i-sonificator ye-probe, i-sonic lyser, i-ultrasound ephazamisayo, i-grinder ye-ultrasonic, i-sono-ruptor, i-sonifier, i-sonic dismembrator, i-cell disrupter, i-ultrasonic disperser noma i-dissolver. Amagama ahlukene avela ezinhlobonhlobo zokusebenza ezingagcwaliseka nge-sonication.